မင်္ဂလာသက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ စုံတွဲလေး - Cele Gabar
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ စုံတွဲလေး
By ChilliPosted on June 6, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ လက်ရှိမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကိုလည်း လွယ်ထားရပြီး မကြာခင်အချိန်မှာ မွေးဖွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့လေးကတော့ အိမ့်ချစ်တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဒီနေ့ ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့လေးမှာ မင်္ဂလာသက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်လေးအတွက် အမှတ်တရပုံလေးနဲ့အတူ
“Our2years anniversary. နောက်၂လဆို သမီးလေး ‘အမရာ’ ဘဝထဲရောက်လာပြီ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ့်ချစ်တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးအတွက် မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဆုတောင်းစကားလေးတွေဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
မဂၤလာသက္တမ္း (၂)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားတဲ့ အိမ့္ခ်စ္တို႔ စုံတြဲေလး
ပရိသတ္ႀကီးေရ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ လက္ရွိမွာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ ပထမဆုံးရင္ေသြးေလးကိုလည္း လြယ္ထားရၿပီး မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ေမြးဖြားေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ အိမ့္ခ်စ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ့္ခ်စ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ဒီေန႔ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔ေလးမွာ မဂၤလာသက္တမ္း (၂)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ေလးအတြက္ အမွတ္တရပုံေလးနဲ႔အတူ
“Our2years anniversary. ေနာက္၂လဆို သမီးေလး ‘အမရာ’ ဘဝထဲေရာက္လာၿပီ” ဆိုျပီး ေရးသားမွ်ေဝထားခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ အိမ့္ခ်စ္တို႕ ဇနီးေမာင္နွံရဲ႕ မဂၤလာနွစ္ပတ္လည္ေန႔ေလးအတြက္ မဂၤလာရွိတဲ့ ဆုေတာင္းစကားေလးေတြဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ” အစ်မ​ဖြစ်သူယွန်းဝတီနဲ့တွေ့ဆုံကာ တစ်ယောက်တစ်မျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့နှစ်ယောက်တွဲပုံလေးတွေကို တင်လာခဲ့တဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုး”
Next post မြေးလေးကို ရှင်ပြုပေးချင်တဲ့ အဖိုးတို့ စုံတွဲလေးရဲ့ ဆန္ဒလေးပြည့်မြောက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက်ရဲ့ ပီတိဖြစ်ဖွယ်ဗီဒီယိုလေး